Dhabancad oo ka been abuuray xuriyadda qowlka iyo xuriyada warbaahinta Puntland - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaDhabancad oo ka been abuuray xuriyadda qowlka iyo xuriyada warbaahinta Puntland
Dhabancad oo ka been abuuray xuriyadda qowlka iyo xuriyada warbaahinta Puntland
Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo xalay marti ku ahaa bar-kulanka Club House, ayaa sheegay in suxufiyiinta Puntland ku shaqeeyaan xorriyad aysan helin weriyaasha kale ee Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa hadalkan sheegay mar uu ka jawaabayay su’aal laga weydiiyay heerka xorriyadda suxufiyiinta Puntland, oo marar badan cabasho ka muujiyay xarig iyo cabburin ay kala kulmaan xukuumadda madaxweyne Deni.
Hadalka ka soo yeeray wasiirka ayaa dad badan ku dhaliyay yaab iyo amakaag taas oo salka ku haysa beenta ka soo yeersaty wasiirka. Waxa is weydiin mudan immisa weriye ayaa Puntland lagu xiray mudadii uu xilka hayay madaxweyne Deni, si aan jawaab dhab ah ugu helno heerka xorriyadda suxufiyiinta ku nool Puntland?. Madaxweyne Deni oo la doortay 8-dii January 2019, wuxu xilka hayaa mudda laba sanno iyo saddex bilood ah, waxaana mudadaas Puntland lagu xiray ilaa 8 suxufi oo ka hawl-gelayay warbaahinta kala duwan.
Suxufiyiin kala duwan oo ku nool Puntland ayaa sheegay in ay handadaad iyo cabburin kala kulmeen xukuumadda madaxweyne Deni, waxaana jirta in weriyaasha qaarkood dalka dibaddiisa u baxeen.